बजाजको V15 बाईक अब नेपाली बजारमा | Nepaliko Aawaj
Nepaliko Aawaj News For All
सफल ब्यक्तित्व (Success in Life)
नेपाली राजनितिमा निकै चर्चीत ः देबेन्द्रराज कण्डेल (अन्तरवार्ता)
सबै पेट दुखाइ ग्यास्ट्रक होइनन् !!
सञ्जयको पहिलो गीत चन्द्रमुखी युट्युबमा सार्बजनिक ।
Secularism and Freedom of Religion in Nepal
भारतीय चर्चीत गायक अंकित तिवारीको कार्तीक ६ गते नारायणगढमा भव्य कन्सर्ट हुर्दै
सडकका कुकुरहरुको व्यस्थापनको लागि सहयोग रकम हस्तान्तरण
बैरिया बुढीकुलो सडक कालोपत्रे निर्माणको आर्थीक विवरण सार्वजनीक ।
कार्तिक ९ गते छठ पर्बको दिनदेखी चलचित्र ’ऐश्वर्य’ देशैभरि लाग्ने
EDV 2019 को फारम कसरी भर्ने ? अमेरिकन काउन्सलरको भनाईको भिडीयो सहित ।
रेवान सौराहाको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न, पर्यटन दिवसमा बिशेष कार्यक्रम गरिने ।
Home / Business News / बजाजको V15 बाईक अब नेपाली बजारमा
बजाजको V15 बाईक अब नेपाली बजारमा
Posted by: Mahesh Pandey July 11, 2016	in Business News, National News 1 Comment
असार २७, चितवन
नेपाली मोटरसाइकल बजारमा नयाँ स्टाइलिस मोडल प्रवेश गरेको छ । भारतीय चर्चित बाइक निर्माता बजाजले ‘भि १५’ नेपाल भित्राएको हो ।
बजाजको बिक्रेता आशिर्बाद अटोमोबाइल्स खैरहनीले एक समारोहबीच ‘भि १५’ बाइक सार्वजनिक गर्यो ।
यो बाइकमा हाई टेक डिटीएस–आई १५० सीसीको इञ्जिन जडित छ । नेपाली बजारमा यसको मूल्य २ लाख ४ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सुलभ मूल्यको उत्कृष्ट बाइक भएको हुँदा नेपालमा लोकप्रिय हुने कम्पनीको विश्वास छ । नेपालका सडकहरुको अध्ययन गरेर ‘भि १५’ बाइक बजारमा ल्याएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुरेश कुमार चौधरीले बताए ।
नेपालको कच्ची सडक, पिच रोडमा भएका खाल्डाखुल्डी, अव्यवस्थित ट्राफिक जाममा यो बाइक उत्कृष्ट रहेको चौधरीको भनाई छ । एक्स्ट्रा ग्रिपका लागि चौडा टायरहरु, सिंगल र डबल सिटर बनाउने व्यवस्था, उत्कृष्ट व्यालेन्स, पृथक एवं शक्तिशाली धातुको बलियोपन, आकर्षक तथा स्टाइलिस डिजाइन यो बाइकका विशेषताहरु हुन् ।
‘भि १५’ ले ५५०० आरपिएममा १३ एनएमको अधिकतम टर्क उत्पादन गर्छ । यसमा टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन र हाइड्रोलिक रियर सस्पेन्सन रहेको छ । बाइकको अगाडिको चच्कामा डिस्क ब्रेक र पछाडिको चक्कामा ड्रम ब्रेक राखिएको छ । दुबै ट्युबलेस टायर हुन् ।
बाइकमा पाँच स्पिड म्यानुअल गियरवक्स र वेट मल्टिप्लेट क्लच जडान गरिएको छ । यसमा १३ लिटरको मेटलबाट बनेको इन्धन ट्यांकी छ । यो बाइकले प्रतिलिटर ५० देखि ५५ किलोमिटरसम्म माइलेज दिने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
‘भि १५’ पर्ल ह्वाइट र इबोनी ब्ल्याक गरी दुई कलरमा उपलब्ध छ । १३५ किलो तौल रहेको बाइकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १६५ मिलिमिटर र ह्वीलबेस १३१५ मिलिमिटर रहेको छ ।
नेपालमा बजाज बाइक लोकप्रिय बनेको छ । नेपाली बाइक बजारमा बजाजको हिस्सा ४५ प्रतिशत पुगेको प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले दाबी गरे । खासगरी बजाजको बक्सर, पल्सर, एभेञ्जर, सिटी १०० मोडल सर्वा्धिक लोकप्रिय छन् ।
नेपालमा करीव १ लाख ७० हजार टु ह्वीलर्स बिक्री हुन्छन् । जसमध्ये १ लाख ३० हाराहारीमा बाइक र बाँकी स्कुटर रहेका छन् ।
कार्यक्रममा दुई रङका बाइकको सार्वजनिकरण संचारकर्मी तथा पत्रकार महेश पाण्डे तथा दाजुभाइ रिकन्डिसन हाउसका प्रोप्राइटर दिपक खड्काले गरेका थिए । कार्यक्रममा ईच्छा भएकाहरुले सवारी चालक अनुमती पत्र नम्बर दर्ता गराइ टेस्ट राइडको मज्जा पनि उठाएका थिए ।
About Mahesh Pandey
Previous: पर्यटन प्रबद्र्धनका लागी ʻʻमिस टुरिजम–२०१६ʼʼ हुँदै, के हो ʻमिस टुरिजम–२०१६?ʼ(अन्र्तबार्ता सहित)
Next: “खैत बाबा बुझेको कुरो बरिलै” भनेर गुनासो गर्दै गायीका मञ्जु पौडेल
Awesome Web site, Preserve the excellent
work. With thanks. http://myclassifiedads.org/user/profile/19810
Nepal : +977-9851163425
Dubai : +971-529697864
Facebook - Nepaliko Aawaj
Youtube - Nepaliko Aawaj
Google+ - Nepaliko Aawaj
Find us on Flicker
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: महेश पाण्डे
निर्देशक: शिव सुबेदी
Powered by Mero Server | Designed by Rijan KC